Tag: ule | Martech Zone
UserTesting: Na-Ina Humanmụ mmadụ nghọta Ka Mma Ahịa Ahụmahụ
Ahịa nke oge a bụ maka ndị ahịa. Iji nwee ihe ịga nke ọma n'ahịa ahịa ndị ahịa, ụlọ ọrụ ga-elekwasị anya na ahụmịhe; ha kwesiri inwe obi ebere na ige nti na nzaghachi ndi ahia ka ha na –eme ka ihe omuma ha meputara ma ziputa. Companlọ ọrụ ndị nabatara nghọta mmadụ ma nweta nzaghachi sitere na ndị ahịa ha (ma ọ bụghị naanị data nyocha) nwere ike ịmatakwu ma jikọọ na ndị na-azụ ha na ndị ahịa ha n'ụzọ bara uru karị. Chịkọta mmadụ
Ntuziaka iji bulie Email Gị emepe, Pịa-Site na Ọnụego Ntugharị
Satọde, Febụwarị 13, 2021 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Otu mkparịta ụka mụ na ndị ahịa na-enwe kwa izu bụ ihe na-emewanye nkụda mmụọ maka iwulite na ịkwagide mmemme ahịa email na-aga nke ọma. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ka ndepụta ahịa email gị na-eto, ya mere mee ka isi ọwụwa gị napụta gị. O yiri ka ndị na-enye ọrụ ịntanetị agbahapụla olileanya ọ bụla nke omume kacha mma na-akwụghachi ụgwọ ma nwee naanị algọridim na-aga n'ihu na-ata ndị ziri ezi ahụhụ. Dị ka ihe atụ, otu n'ime ndị ọrụ ibe m na ụlọ ọrụ hụrụ Yahoo! igbochi 100%
Monday, August 13, 2018 Monday, August 13, 2018 Douglas Karr
N'oge na-adịbeghị anya enwere m obi ụtọ isonyere CRMradio pọdkastị ya na Paul Peterson si Goldmine, na-atụle etu ụlọ ọrụ, ma obere na nnukwu, si na-enye ahịa dijitalụ. I nwere ike ige nti ya ebe a: https://crmradio.podbean.com/mf/play/hebh9j/CRM-080910-Karr-REVISED.mp3 Jide n'aka ịdenye aha ma gee CRM Radio, ha nwere ụfọdụ ndị ọbịa dị ịtụnanya na ihe omuma gbara ajụjụ! Paul bụ nnukwu onye ọbịa na anyị jere ije na ajụjụ ole na ole, gụnyere usoro niile m na-ahụ, ihe ịma aka maka azụmaahịa SMB, uche ndị na-egbochi
Monday, August 14, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Otu n'ime ihe omuma ihe omuma ndi anyi mere bu ikwu okwu na SaaS Budget Budgets na pasent ole nke ego ha nwetara ụfọdụ ụlọ ọrụ na-emefu iji kwado ma nweta òkè ahịa. Site n'itinye ego ahia ahia gi na onu ogugu onu ego, o na enye ndi ahia gi ka ha bawanye onu ahia gi dika ndi ahia gi choro. Ewepụghị Amawapụta mepụta ewepụghị utịp… ma ị chọta ego ebe ke mix. Ihe omuma a sitere na Mgbasa Ozi MDG,
Etu ị ga-esi mee ngwa ahịa ngwa ahịa ekwentị ndị eji eme njem na mbido
Fraịde, Ọgọstụ 4, 2017 Thursday, August 3, 2017 Liza Knotko
Oge ịmalite tupu oge eruo bụ otu n'ime oge dị oke egwu na ndụ nke ngwa. Ndị nkwusa ga-arụ ọrụ imirikiti ọrụ nke na-etinye njikwa oge ha na usoro nhazi usoro ha maka ule ahụ. Agbanyeghị, imirikiti ndị ahịa ngwa anaghị achọpụta na nyocha A / B nwere nka nwere ike ịmụrụ ha ụtọ ma nyere aka rụọ ọrụ dị iche iche tupu ebido. E nwere ọtụtụ ụzọ ndị nkwusa nwere ike isi tinye nyocha A / B tupu ngwa ahụ amalite
Google Na - ebuputa oru maka ndi ahia maka nnwale
Tọzdee, Disemba 1, 2016 Saturday, December 3, 2016 Douglas Karr
Ebumnuche nke Google ebidola na beta maka ndị ọrụ pere mpe. Enwere m ike debanye aha ma jee ije n'elu ikpo okwu taa na ihe niile m nwere ike ikwu bụ - wow. Enwere ihe 3 mere m ji kwenye na nke a ga-abụ nnukwu ọgba aghara na ahịa nnwale. N'ezie, ọ bụrụ na m bụ usoro nyocha, enwere m ike ịpụ apụ ugbu a. Onye ọrụ interface bụ agbanwe agbanwe na ndị ọzọ
10 Atụmatụ iji kwado gị Email Marketing na Social Media
Ọ bụrụ na ị bụrụla onye na-agụ akwụkwọ a ruo nwa oge, ị maara etu m si eleda ozi email na arụmụka mgbasa ozi ọha na eze anya n'ebe ahụ. Iji kpughee ikike nke usoro ahia ọ bụla, ịkwado mkpọsa ndị ahụ n'ofe ọwa ga-eme ka nsonaazụ gị dịkwuo mma. Ọ bụghị ajụjụ banyere, ọ bụ ajụjụ na. Site na mgbasa ozi ọ bụla na ọwa ọ bụla, olee otu ị ga - esi hụ na ị bawanye na nzaghachi ọnụọgụ na ọwa ọ bụla ị nwere. Email? Na-elekọta mmadụ? Ma ọ bụ
Ihe ndị ahịa kwenyere bụ ihe ịga nke ọma atọ na - eduga mmadụ
Wednesday, February 24, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ndị ukwu nọ na Formstack nyochara azụmaahịa 200 pere mpe na ọkara nke US na enweghị uru iji mata ebe ndị ahịa na-aga nke ọma na atụmatụ ọjọọ nke usoro ndu ha. Ihe omuma ihe omuma a bu ihe nlele nke oma na ndu nke ndu nke 2016 na ihe omuma ndi ozo banyere nsogbu na ndu. Nchọpụta mbụ ha, ahịa ahụ chọrọ nghọta banyere ahịa ndị na-emechi, karịrị akarị. N’ụzọ na-akpali mmasị, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme ka ahịa ghara ịga ahịa